‘चिसो मान्छे’ एक फरक गन्तव्य – Waikhari
गृहपृष्ठ खबर ‘चिसो मान्छे’ एक फरक गन्तव्य
‘चिसो मान्छे’ एक फरक गन्तव्य
काठमाडौं : श्रीमान्को शव लिन काठमाडौं जान गाडी भनिरहेका बेला उनी अर्थात् चलचित्रकी मुख्य पात्र ९स्वस्तिमा खड्का० भाग्छिन् । श्रीमान्को शव कफिनमा छ, तर उनलाई त्यसप्रति उति धेरै दुःख छैन जति उनीप्रति हलमा सिनेमाका दर्शकको सहानुभूति छ । जिन्दगी बेसाहारा भएको छ, तर उनलाई जिब्रोमा ट्वाक्क लाग्ने पाउँ खानुपरेको छ । सामुन्नेमा श्रीमान्को शव छ, तर उनलाई मासु–भात खानुपरेको छ । श्रीमान्को शव लिएर घर गइरहेकी उनलाई उनमुक्त भएर नाच्नुपरेको छ । श्रीमान्को शव गाडीमा छ, तर उनी चालकसँग होटेल पुगेर बस्न असहज मान्दिनन् । श्रीमान्को शव कुरेर ससुरा बुवा गाडीमा बसेका छन्, तर उनी लुकीलुकी गीत गाउन असहज मान्दिनन् । शव सद्गत गर्न लास काँधमा बोकेर हिँडिरहेकी छन्, तर पनि उनी चालकसँग आँखा जुधाउन छोड्दिनन् । बाँकी र बीचमा के हुन्छ, त्यो जान्न चलचित्र ‘चिसो मान्छे’ हेर्नुपर्छ ।
चलचित्र निर्देशक तथा समीक्षक मनोज पण्डित बेला–बेलामा भन्ने गर्छन्– कुरूप मान्छेको कथामा बनेका चलचित्र नै विश्वका सबैभन्दा सुन्दर र राम्रा चलचित्र हुन् । त्यो भए चिसो मान्छेकी मुख्य पात्र समाजको त्यस्तै कुरूप पात्र हुन् ? जो मनोज बेला–बेला भन्ने गर्छन् ।
होइन । श्रीमान्सँग उनको हृदय नजोडिनुको कारण सिनेमाले प्रस्ट भनेको छ । घर घरजस्तो नलाग्नुको कारण खुलाइदिएको छ । त्यसैले उनी कुरूप पात्र होइनन् । कुरूप पात्र त यो समाज र संस्कार हो । कुन ? निर्देशकले चलचित्रमा देखाइदिएका छन् ।
पोस्टर, टिजर र ट्रेलर हेर्दा तपाईंले अनुमान लगाउनुभएको थियो, चलचित्र विदेश गएर कफिनमा फर्किने मान्छेको संघर्षको कथा हो । त्यसैले यसको नाम ‘चिसो मान्छे’ हो ।
तर, होइन । कथा कोरोनाको कहरको समयको हो । तर, कोरोना कहरकै पनि होइन ।
निर्देशकले वैदेशिक रोजगारमा रहेका बेला ज्यान गुमाएको व्यक्ति, उसको परिवार र समाज तथा कोरोनाको कहरको समयमा देखिएको संवेदनहीन मानव मसुदायको कथा भनेका छन् । दुइटा कथाको बीचमा संवेदना गुमाइसकेको समाज र मान्छेको कथा भन्ने निर्देशकले त्यसैलाई चिसो मान्छे भनेका छन् । चिसो समाजको कथालाई उनले चिसो मान्छेको टाइटल दिएका छन् ।
झट्ट हेर्दा कथा कोरोनाको हो कि कतारमा ज्यान गुमाएको व्यक्ति र उनकी श्रीमतीको भन्ने लागे पनि चलचित्रले यसलाई माध्यम बनाएर चिसिँदै गएको समाजको कथा भनेको छ ।
चलचित्र दृश्य भाषा हो । बोलेर होइन, देखाएरै धेरै कुरा भन्नुपर्छ । यसलाई चलचित्रले आत्मसात् गरेको छ । धेरै संवाद छैनन् चलचित्रमा । जिब्रो होइन, आँखा बोलेका छन् । हाउभाउ र लवजले धेरै कथा भनेको छ । विम्ब र प्रतीक छन् । त्यससँग धेरै कुरा जोडिएर आएका छन् ।
चलचित्रमा भद्दा दृश्यमार्फत रोमान्टिक सिन देखाइएको छैन । शारीरिक समागमका भद्दा दृश्य नदेखाए पनि दर्शकलाई बुझाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि नेपाली चलचित्रलाई चिसो मान्छेले दिएको छ ।
चलचित्रले धेरै कुरा संवादमार्फत भन्दैन । दर्शकले आफैँ बुझ्नुपर्छ । आर्ट मुभी हेर्ने दर्शकले बुझुछन् पनि ।
प्रशासनले आफ्नै नागरिकलाई दुःख दिन्छ । गाडीमा छोराको लास बोकेर घर हिँडेको बाउसँग प्रहरीले घुस माग्छ । सहयोग र संवेदना खर्चिनुपर्ने होटेलवाला तर्किन्छ । बाटो देखाइदिनुपर्ने स्थानीय बाटो थुन्छन् । जोरजाम गरेर सहयोगी बन्नुपर्ने गाउँले लाठी र मुंग्री गर्दै आइलाग्छन् । समाज आफ्नै स्वार्थ मात्र हेर्ने भएको छ । त्यसैले त निर्देशकले चिसिएको समाजको कथा भनेका छन् । निर्देशक आफ्नैबाट पाएका पीडा र तिरस्कारका कथा भन्छन् । त्यसबाट विचलित भएर फर्किन नसकेको मनको कथा भन्छन् ।
केही कथा संवादबाट आए, धेरैचाहिँ दृश्यबाट । डुब्दै गरेका घाम । कहिल्यै खुल्न नसकेको मौसम । अनि, सबैभन्दा शक्तिशाली गाडीका पांग्रा । त्यो पनि घरी दुइटा घरी तीनवटा । त्यसमा पनि स्वस्तिमाले गुडाउने एउटा र अर्पणले गुडाउने दुइटा । गाडीमा गुड्दै गरेको कफिन, त्यसको ठिक माथि उड्दै गरेको जहाजमा स्वस्तिमाका आँखा । कथा यसैगरी भन्छन्, निर्देशक । अक्सर नेपाली दर्शक केही बुझ्दैनन् भनेर संवादमाथि संवाद थोपरेर एफएम रेडियोको कार्यक्रमजस्तो सिनेमा बनाउनेका लागि फरक स्वाद दिने प्रयत्न चलचित्रले गरेको छ ।
कथा भन्न निर्देशकले जसलाई रोजे उनीहरु उम्दा देखिए । स्वस्तिमा र अर्पण चरित्रमा पोख्त छन् । देशभक्त खनालले दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निभाएका छन् । सहायक पात्रहरू बिझाउँदैनन् ।
त्यसो त बिझाउने पक्ष पनि छन् । एकै प्रकृतिका लामा–लामा दृश्य छन् । जसमा दोस्रो निर्देशक सम्पादकको आँखा पर्न सकेन । गीत गाएर मुख्य पात्र दुःख भुलाउन खोज्दै छे कि आफ्नो सपना, ससुराबाको एउटा संवादले उनको चाह नै नाच्ने–गाउने हो भने पनि त्यसलाई स्थापित गराउन निर्देशकले जोडबल गरेका छैनन् । भागेर जंगलको बीचमा गएर नाचेको दृश्य नाचगानभन्दा पनि स्वतन्त्रताको खुसीका रूपमा बढी अर्थ्याउन सकिन्छ ।
आँखाको भाकाले बोल्न रुचाउने चालकले संस्कृतको लामो श्लोक भनेको त्यति धेरै मिल्दो लाग्दैन, भलै उसले जिन्दगीको सारांश नै भनेको किन नहोस् । निर्देशक दृश्यमा जति खेले साउन्डमा त्यति नै किन खेलेनन् ? प्रश्न खड्किन्छ ।
तर, यति हुँदाहुँदै पनि निर्देशकले फरक बाटो हिँडेरै जित्न खोजेका छन् । आम निर्देशकको मनाङ–मुस्ताङमा भीड लागेका बेला जसरी उनी त्योभन्दा पर बाजुरा पुगेका छन्, त्यसैगरी उनले अरूभन्दा फरक बाटो र गन्तव्य रोजिरहेको चिसो मान्छेले देखाइदिएको छ ।
कलाका विभिन्न विधामध्ये कुन कसलाई मनपर्छ, त्यो व्यक्तिअनुसार फरक पर्छ । चलचित्र पनि कलाको एक विधा हो । यसभित्र पनि थुप्रै विधा छन् । ती थुपै्र विधामध्येको यो पेसको चलचित्र हेर्न रुचाउनेलाई चिसो मान्छे मनपर्छ । तर, एक्सन, थ्रिलर र रोमान्टिक सिनेमा हेर्ने दर्शकका लागि भने यो चलचित्र होइन ।
कलाकार : स्वस्तिमा खड्का, अर्पण थापा, देशभक्त खनाललगायत ।